समग्र लेखमा पूर्ण सहमती भएपनि शिर्षकमा भने मेरो सहमती छैन ।
राम्रो लेख छ। श्रिलंकालीको युद्दको उतार चढाव बाट नेपालीले पनि केही सिक्नु नै पर्छ।
युद्ध को परिणाम कोही अनि कसैका लागि पनि कहिँ सुखद हुँदैन । श्रीलंका को कुरालाई समातेर गरिएको तातो बहस, मलाई चाँहि मन पर्‍यो है !
तटस्थ तर्क सहितको उत्कृष्ट विबेचना !
हो, देश टुक्रयाउने 'एक मधेश एक प्रदेश'को माग गर्नेहरूले यसबाट केही सिक्नैपर्छ ।